Wararka Dibada	Itoobiya oo Isbedello ballaaran ku sameysay Biya Xireenka Al-Nahda.
Dowladda Itoobiya ayaa sii laba jibaartay qorshaha ay uga faa’ideysaneyso webiga Al-Niil ee mara dalkaas, kaas oo ay kaga sameysay biya xireenka Al-Nahda si ay uga soo saarto koronto baaxad weyn. Warbixin lagu qoray wakaaladda rasmiga ah ee Itoobiya oo soo xiganeyso golaha fulinta ee ku howlan habeynta biya xireenka Al-Nahda ayaa sheegtay in tallaabadan ay sare u qaadeyso dabka ...	Read More »
Donald Trump oo weerar Afka ah ku qaaday madaxweynihii hore ee Maraykanka.
Madaxweynaha Maraykanka Donlad Trump ayaa waraysi uu siiyay mid kamida h Tvyada ugu caansan dalka Maraykanka, wuxuu weerar afka ah ku qaaday madaxweynihii hore ee Maraykanka Brack Obama. Donald Trump ayaa ku eedayay Obama iyo teamkiisii hore ee shaqada iney ka dambeeyeen banaanbaxyada ka dhacay dalka Maraykanka markii talada dalkaas uu la wareegay Trump. Wuxuu sheegay inuu hubo in ...	Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Baxreyn ayaa tibaaxaya in maalintii shalay oo Axad ahayd ay la kulmeen ciidamo katirsan Booliiska dalkaas weerar qarax ahaa, kaas oo sida muuqatay lagu aasey hareerta wadada laamiga ah. Ciidamada la weeraray oo ku guda jiray roondo la sheegay in lagu sugayay Amaanka ayaa waxaa soo gaaray waxyeello kala duwan. War kasoo baxay wasaaradda arimaha gudaha ...	Read More »
Nin hubeysan oo labo Ruux ku dilay dalka Maraykanka.
Wararka ka imaanaya gobolka Kansas ee dalka Maraykanka ayaa tibaaxaya in nin hubeysan oo toogasho kula kacay dad ku sugnaa goob lagu daawado Ciyaaraha oo ku taallla gobolkaas. Qofka hubeysan ee dilka geystay oo ku dhawaaqayaya, iiga baxlkeyga ayaa rasaas la dhacay labo ruux oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Hindiya, waxaana goobtaas ku dhintay hal ruux, isagoona mid kale ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka, wuxuu kamid yahay barnaamijyada todobaadla ah ee ka baxa warbaahinta islaamiga ee Alfurqaan, waxaana lagu soo gudbayaa xaaladaha ka taagan caalamka Islaamka. Todobaadkan waxaa barnaamijka xoogiisa aan ku qaadanay Istish-haadka Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan iyo bayaanaadka Taczida ah ee laga soo saaray. Halkan ka Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 24-02-2017	Read More »
Page 4 of 41« First...«23456	»	102030...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan